Olona enina voasambotry ny zandary : nahatrarana galonana kolonely sy fitombokase maro ireo mpisoloky | NewsMada
Olona enina voasambotry ny zandary : nahatrarana galonana kolonely sy fitombokase maro ireo mpisoloky
Taratasy hosoka, fitombokase hosoka ana sampandraharaham-panjakana, galonana kolonely an’ny Tafika… Ireo no saron’ny zandary tamin’ity tambajotra mpanao fisolokiana avo lenta amin’ny fivarotana tany, teny Alakamisy Fenoarivo ny zoma teo.
Voasambotry ny zandary avy ao amin’ny sampandraharaha misahana ny heloka bevava eny Fiadanana, ny zoma teo teny Alakamisy Fenoarivo ireo olona enina voarohirohy ho mpisoloky tanin’olona. Araka ny fanazavan’ny zandary, taratasy hosoka, fitombokase hosoka amin’ny fivarotana sy fisandohana tanin’olona no ataon’ireto mpisoloky ireto. Fantatra, araka ny tatitra nomen’ny zandary fa ny taona 2014 no efa nanao ity asa ratsy ity teny amin’ny faritra Itaosy ireto olona voarohirohy ireto, saingy izao kosa vao tratra izy ireo. Nitohy teny Alakamisy Fenoarivo indray izany taty aoriana, kanjo noraisim-potsiny.
Manana ny paikady sy ny fombafomba rehetra entina misoloky ireto olona ireto ary mipetrapetraka manaraka ny lamina samihafa mihitsy izany. Tadiavin’izy ireo ny taratasin’ny tany iray miaraka amin’ireo antontan-taratasy mifandraika amin’izany. Rehefa azony izany, mitady olona antitra iray izy ireo ary anaovany kara-panondro hosoka maromaro io rangahibe io. Hamoronan’ireo olon-dratsy taratasy fifampivarotana tany ilay rangahibe ka io taratasy io no entina hamitahana ny mpividy izay hividy ny tany. Miafina ao ambadik’ity rangahibe ity hatrany ireo mpisoloky rehefa misy ny fanenjehana azy ireo.
Marobe ireo olona efa lasibatra…
Amin’iny faritra Atsimondrano iny no tena fanaovan’izy ireo ny asa ratsiny, raha ny tatitra nampitain’ny zandary hatrany. Nanao ny vela-pandrika rehetra ahafahana misambotra ireto jiolahy ireto ny zandary taorian’ny fitoriana nataon’olona iray voasolokin’izy ireo. Taratasy hosoka marobe, fitombokase hosoka an’ny sampandraharaha samihafa, galonana kolonely an’ny Tafika no tratra tany amin’izy ireo nandritra ny fisavana nataon’ny zandary ny tranon’ireto olona ireto.
Hatreto aloha, tsy fantatra marina fa mbola mandeha ny famotorana mikasika ity raharaha ity na misy manamboninahitra ambony na tsia miray tendro sy/na ambadik’ity raharaha fisolokiana avolenta ity. Voalaza rahateo fa maro ny olona efa lasibatry ny fisolokiana nataon’ireto jiolahy ireto. Voahoso-potaka amin’ny raharaha toy izao indray ny fianakaviamben’ny Foloalindahy, saingy ny famotorana hatrany no manamarina izany. Tsikaritra kosa fa misy hatrany ireo begalona miray tendro sy ambadik’ireny andian’olona manao asa fisolokiana ireny. Tokony ho mailo hatrany ny rehetra, eo anoloan’izany.